” မပိတ်စကောင်း ပိတ်စကောင်း “ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ” မပိတ်စကောင်း ပိတ်စကောင်း “	17
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Jan 28, 2016 in Creative Writing, Travel | 17 comments
“မပိတ်စကောင်း ပိတ်စကောင်း ”
ပြီးခဲ့တဲ့ ငါး ရက်လောက်က ကျနော် မန်းလေးက နေမူဆယ်ကို အလုပ်နဲ့သွားဘို့ဖြစ်လာပါတယ်။
ဒါနဲ့ဘဲ လမ်းခရီးအကြောင်းစုံစမ်းတော့ ဟိုရက်ကတော့ လမ်းတွေပိတ်နေတယ်လို့
အခုရက်တော့ လမ်းနည်းနည်းပွင့်ပြီလို့  သတင်းကြားရပါတယ်။
မနက် ရနာရီလောက်မှာ လာကြိုတဲ့ကားနဲ့ မူဆယ် မန်းလေးခရီး
ပြင်ဦးလွင် ရောက်တော့ မနက် ရှစ်နာရီကျော်ကျော်။
မနက်စာ စား ဘို့ ခဏသာနားပြီး ခရီးဆက်ခဲ့ပါတယ်။
၀က်ဝံကိုလွန်ပြီး မကြာခင်မှာဘဲ ဆောင်းတွင်းကြီးမှာ မိုးတွေ
မိုးကသဲလဲ မသဲ ခပ်ဖွဲဖွဲ ဆိုတော့ ကားကို ဖြည်းဖြည်းဘဲမောင်းလို့ရပါတယ်။
“လမ်း ပိတ်နေပြန်ပြီ ထင်တာဘဲ “လို့ ကားဆရာလေးက ညည်း ပြော ပြောပါတယ်။
ပုံမှန် ဆိုရင် မန်းလေးကနေ မနက်စောစော (၇)နာရီလောက်ထွက် ခပ်သွက်သွက်
မောင်း လမ်းမှာလဲ အကြာကြီးမနားဘူးဆိုရင် ညနေလေးနာရီခွဲလောက်မှာ
မူဆယ် မြို့ထဲကို ရောက်နိုင်ပါသတဲ့။
အိပ်စ်ပရက် ကားကြီးတွေတောင်မှ ညနေ ငါးနာရီလောက်ထွက်ရင်
နောက်နေ့ မနက် ဆယ်နှစ်နာရီဆိုတာအလွန်ဆုံးထားပြီး မူဆယ်
ပြီးခဲ့ အပါတ်ထဲ က ကားအသေးတွေတောင်မှ အဆင်မသင့်ရင် တစ်ညအိပ်ရပါသတဲ့။
ကုန်ကားတွေ ဖရဲကားတွေ အတက်များလာပါတယ်။
နှစ်သစ်ကူးနီးလာပြီဆိုတော့ ဖရဲသီးအရောင်းသွက်တာလဲ ပါ ပါတယ်။
(အခုနောက်ပိုင်း ဖရဲကားတွေက အပြန်မှာဘာကုန်မှမတင်ဘဲ
ကုန်တင်ပြီး ပြန်လာရင် ပုံမတော်ရင် ရှုံးတယ်လို့ဆိုပါတယ်)
ကျနော်တို့တက်လာတဲ့နေ့က တော့ လမ်းမှာ ဖရဲကားအတော်များများကို
ဆယ့်နှစ်ဘီးတွဲကား တစ်ကားက အရှိန်လွန်ပြီး ကွေ့မရပြုမပြဖြစ်နေလို့ပါတယ်။
ဆယ့်ငါးမိနစ်လောက်ကြာတော့မှ ကားလေးတွေ တန်းစီပြီး ဆင်းလာတာတွေ့မိမှ
ကျနော်တို့ ဆက်လာလိုက်တာ ကျောက်မဲသီပေါ ကိုဖြတ်လာချိန်မှာတော့
ကားဆရာလေးက “ဘယ်မှာ ထမင်းစားကြမလဲ “လို့မေးတော့
ဘိုက်လဲသိပ်မဆာတော့ လားရှိုးရောက်မှ စားမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။
ဒါနဲ့ဘဲလားရှိုးမြို့ရှောင်လမ်းက မလာဘဲ မြို့ထဲကဖြတ်လာခဲ့ကြပါတယ်။
ကျနော်တို့ လားရှိုးမြုိ့ အထွက် က ထမင်းဆိုင်လေးကိုရောက်တော့
ထမင်းစားနေတုန်းမှာဘဲ ကားဆရာလေး ဆီကို ဖုန်းဝင်လာပါတယ်။
အစောကလေးတင်ဘဲ ရှု့ခင်းသာနားမှာ တွဲကားတစ်စီးမှောက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဆိုးပါဘဲ။
ရေသန့်ဘူးတွေရယ် အလွယ်စားလို့ ရတဲ့ အာလူးကြော်တို့
ငါးမုန့်ထုပ်တို့ ရယ် ငှက်ပျောသီးတစ်ဖီးရယ်ဝယ်လာခဲ့ကြပါတယ်။
သိပ်မကြာခင် အဆင်းကားဘက်က ကားတွေ တစ်စီးချင်းဆင်းလာတာတွေ့ရပါတယ်။
လမ်းနံဘေးမှာတော့ အဲ့ကားက ချထားတဲ့ပစ္စည်းတွေပုံထားပါတယ်။
အဲဒီနေရာက လွန်ပြီး သိပ်မကြာခင်မှာ နောက်ထပ်ကားတွေတန်းစီရပ်ထားတာကိုမြင်ရပြန်ပါတယ်။
မိုးမှောင်တော့ အလင်းပျောက်တာ ပိုမြန်သွားသလိုပါဘဲ။
ကျနော်လဲ အညောင်းပြေလမ်းဆင်းလျှောက်တော့ မှ
ကားတန်းက က နှစ်တန်းမဟုတ်ဘဲ အလည် မှာ
လွတ်နေတဲ့မြေလမ်းကနေ ဇွတ်တိုးပြီး ရှေ့ရောက်အောင်သွားနေတာကိုမြင်ရပြန်ပါတယ်။
လမ်းပြောင်းပြန်ရော လမ်းအတည့် ပါ နေရာလွတ်မကျန်အောင်
ပိတ်ရပ်ထားကြတော့ ရှေ့တိုးမရ နောက်ဆုတ်မရနဲ့ ကားတွေက အချိန်ကြာလေများသထက်များလေဖြစ်လာပါတယ်။
နောက်တော့မှ ကောင်လေးနှစ်ယောက်က ကားတစ်စီးခြင်းကိုလိုက်ပြောပြီး
ပိတ်တဲ့နေရာကလွတ်လို့ မှ မကြာသေးခင် ရှေ့တစ်နေရာက
နာရီဝက်လောက်စောင့်ပြီးတဲ့အခါမှာ ကားက တရွှေ့ရွှေ့နဲ့ပြန်ထွက်ကြရပြန်ပါတယ်။
ညမှောင်မဲနေချိန် တောင်ပေါ်တက်နေတဲ့ကားတွေရဲ့မီးတွေက တစီတန်းကြီးက
“စားပြီးနားမလည်” ဆိုတဲ့စကားလုံးကို အသက်သွင်းပေးနေသလိုပါဘဲ။
သွားလာနေတဲ့ ခရီးသည်တွေ ကုန်ကားတွေ မိုးထဲရေထဲ
မိုးအေးတော့ ဆိုင်အတော်များများပိတ်ရုံမက တစ်မြို့လုံးနီးပါးလောက်အိပ်နေပါပြီ။
နာရီစဉ်မရောက်ခင်နားမှာ တွေ့တဲ့ဆိုင်လေးမှာ ညစာခေါက်ဆွဲစားလိုက်ကြရပါတယ်။
တည်းခိုခန်းရောက်လို့ အ၀တ်အစားလဲပြီးချိန်မှာတော့ ည ဆယ့်နှစ်နာရီတိတိဖြစ်နေပါပြီ၊။
နေရတာ ဘာကြောင့်လဲလို့ တွေးကြည့်မိပါတယ်။
ဒီမူဆယ်မန်းလေး လမ်းတွေက အရင်ကထက်စာရင်ပိုကောင်းလာတာအမှန်ပါဘဲ။
လမ်းမှာလဲ လမ်းပြင်တဲ့ လုပ်သားတွေ အမြဲရှိနေပါတယ်။
အချို့သောနေရာတွေမှာ ကတ္တရာလမ်းပျက်နေပေမယ့် သွားမရလောက်အောင်မဆိုးသေးပါဘူး။
ကားအသွားအလာကတော့ အရင်ကထက်ပိုပြီး များလာတာအမှန်ပါဘဲ။
ဟိုးအရင်ကတော့ ခြောက်ဘီးကား ဆယ့်နှစ်ဘီးကားတွေ အသွားများပါတယ်။
ဒီဘက်နှစ်ပိုင်းတွေမှာတော့ တွဲကားတွေ ပေါ်လာပါတယ်။
ကုန်ချတာစောင့်ရတဲ့ ဒုက္ခက ငြိမ်းသွားပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီကားတွေက ကွေ့တဲ့အခါမှာ ကားခေါင်းနဲ့အတူပါမသွားဘဲ
ဒီတော့ ကွေ့တဲ့အခါ မှာ နေရာအရမ်းယူတော့လမ်းကိုကန့်လန့်ပိတ်သလိုဖြစ်သွားပါတယ်။
ကား ချောက်ထဲ ထုိးဆင်းသွားတာ
အခုနောက်ပိုင်းလမ်းမှာ ကားပျက်တာ မတော်တဆမူ့တွေက
နောက်တစ်ချက် က အိမ်စီးကားအသေးလေးတွေ
မတော်တဆ လမ်းပိတ်သွားတဲ့အခါ ကိုယ့်လမ်းကြောဘက်မှာ
အများနည်းတူ မစောင့်ဘဲ လမ်းလုပြီးဇွတ်တိုးကြတာတွေ
တစ်စီးနဲ့တစ်စီး လမ်းမလွတ်တဲ့အခါမှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်
အလျှော့မပေးဘဲ ခေါင်းခြင်းဆိုင် မာနပြိုင်ကြတာတွေကြောင့်
အခုအခါမှာတော့ မူဆယ် မန်းလေးလမ်းမှာအသွားအလာများသထက်များလာပါပြီ။
ဒီလိုဘဲ လမ်းပိတ်တဲ့ကိစ္စက ဖြစ်နေကြအုံးမှာပါဘဲ။
ကျနော်အမြင်ပြောရရင်တော့ ဒီလမ်းကို ဒေါနတောင်လမ်းလိုဘဲ့
အဆင်းတစ်ရက် သတ်မှတ်လိုက်ရင် ကားလမ်းပိတ်တဲ့ ပြဿနာ
နောက်တစ်ချက်က လမ်းအပိုင်းတိုင်းမှာ ကိုယ်နယ်နဲ့ကိုယ်
နောက်ဆုံးပြောရရင်တော့ ဒီတောင်ပေါ်လမ်း နဲ့
အခု အသုံးများနေကြတဲ့ တွဲကားတွေ
ုသဟဇာတ ဖြစ်မဖြစ် ပြန်လည်စီစစ်ဘို့ လိုပြီလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
အားလုံးဘေးကင်းကွာပြီး သွားလိုရာ ခရီးကို
သက်တောင့်သက်သာ နဲ့ မြန်မြန်ရောက်စေချင်လှပါတယ်။
အောင် မိုးသူ says: ငါဆိုတဲ့ အတ္တ
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: စွဲတွေမကင်းရင်
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .ရန်ကုန်မှာကားပိတ်တာအများစုကလည်း အဲ့ဒီလိုစည်းကမ်းမရှိလမ်းပြောင်းပြန်ကျော်တက်လို့ပါပဲ
.လူတွေစည်းကမ်းမရှိသ၍ ဒီဒုက္ခတွေဘယ်လိုမှရှင်းပေးဖို့မလွယ်ဘူး ကိုပေါက်ေ၇
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကိုယ့်အလှည့်ရောက်အောင် မစောင့်နိုင်တဲ့
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: လိုင်စင် မပေးခင် အရည်ချင်းစစ်တဲ့အခါ ယာဉ်မောင်း
တတ်ယုံနှင့် မပြီးပဲ အကျင့်စာရိတ္တနဲ့ဆိုင်တဲ့
ဆိုက်ကို မေးခွန်းများများ မေးပြီးစောက်ကျင့်မကောင်းတဲ့
စရိုက်လက္ခဏာ ပါရင် အကျစာရင်းသွင်းသင့်တယ် လို့
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: အေးဗျအဲလို တစ်ခါမှမစဉ်းစားမိဘူး
ကထူးဆန်း says: အဟိဟိ .. လေးပေါက် ရေးထားသလိုဘဲ စေတနာ ပါ သလောက် နဲ့ မက ပေးလိုက်လို့ ရနေသရွေ့ .. အေးချေးပါ … နောက် မေးခွန်းတွေ copy ဆွဲ ရောင်းမှာပေါ့ အူးမြောက်မြောက် ရယ် .
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ပေးရင် အေးတဲ့စနစ်ဆိုးက
သင့်အေးရိပ် says: အဲ့လို နယ်ဘက် လမ်းတွေမှာ ကိုယ်တိုင် မမောင်းဖူးသေးဘူး…
သူများမောင်းတာပဲ စီးပြီး လိုက်ဖူးသေးတယ်…
ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ မောင်းပြီး… လေ့လာချင်သေးတယ်….. ယာဉ်လမ်းကြောပိတ်တဲ့ ဒဏ်က… ရန်ကုန်လို မြို့ကြီးထဲမှာတောင် မဟုတ်တော့ပဲ….
စနစ်ကြောင့် မဟုတ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 11642
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: နယ်လမ်းတွေထဲမှာ
ကားပိတ်တတ်တာက မူဆယ် နမ်းခမ်းလမ်း
မူဆယ် ကွတ်ခိုင် မန်းလေးလမ်း
uncle gyi says: အရင်မူဆယ်လမ်းပိတ်တယ်ဆိုတာသဘာာဝကျတယ်
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: အန်ကယ်ဂျီး
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ဒီဆောင်းပါးလေး က 9-2-2016 နေ့ထုတ် ကုမုဒြာ ဂျာနယ်မှာ ဖော်ပြတာ ခံရပါတယ်
kai says: လူသားတိုင်းခွင့်တူညီမျှရှိရမယ် ..ဆိုတာကို.. (မသိစိတ်/သိစိတ်)ထဲကနေ..လက်မခံနေလို့ဖြစ်တာလို့ပြောရင်.. မြန်မာအများစုကြီးက.. လက်ခံမှာမဟုတ်ဖူး..။
ဒါပေမယ့်.. ဒါအမှန်ပဲလို့.. ရဲရဲပြောဝံ့တယ်…။
လူသားတိုင်း… ခွင့်တူညီမျှ ရှိပါမှ…။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ရှေးပဒေသရာဇ်လက်ထက်ကစပြီး
အခုချိန်ထိ အခွင့်ထူးခံ လူတန်းစားကရှိနေဆဲပါဘဲ။
kai says: အတွေးအခေါ်တို့၏ အမြုတေ..အချုပ်သည်… ဘာသာရေး.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 11642
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: အဲလိုဖြစ်နေတာ နေရာအနှံ့အပြား